Google na AMEX na -emepụta vidiyo vidiyo maka obere azụmaahịa | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 2, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nwee obere azụmahịa? Nnyocha Google na-egosi na vidiyo dị n'ịntanetị nwere ike ịkwalite ahịa na ụlọ ahịa site na 6%, ma bulie ncheta akara site na 50%. Google na American Express na-ejikọ ma na-emepụta vidiyo maka obere azụmaahịa iji kwalite obere azụmaahịa ha site na iji vidiyo.
My Business Akụkọ bụ ngwa ọrụ n'efu maka obere azụmaahịa sitere na Google na American Express. Ngwaọrụ ahụ na-enye usoro ntụpụ-aka nke ndị nwe obere azụmaahịa iji mepụta vidiyo n'efu, ọkachamara ọkachamara banyere azụmaahịa ha. A ga-echekwa vidiyo ndị ejiri ngwa ọrụ My Business Story debe ya na akaụntụ Youtube onye ọ bụla nwere azụmaahịa ma nwee ike iji ya dị ka azụmaahịa ma ọ bụ akụ mgbasa ozi n'ọdịnihu.
Nke kachasị mma, vidiyo ahụ bụ n'efu ma ha na-enweta nlebara anya. Imirikiti vidio ndị m hụrụ na ọrụ ahụ nwere echiche 20,000 ruo 500,000. A na-egosi vidiyo ndị ahụ ma tinye ha na My Business Akụkọ nke gallery ma enwere ngalaba pụrụ iche iji nyere aka obere ulo oru na ahia ha na ntaneti.
Tags: American Expressamexvidiyo googlegoogle +obere azụmahịaahịa vidiyoyoutube video